Chef | Best Western Green Hill Hotel (Yangon) ﻿
8.2.2019, Full time , Hospitality / Hotel
Company: Best Western Green Hill Hotel (Yangon)
Welcome to Best Western Green Hill Hotel Yangon, One of Best Western Hotel Group, The World's Largest Hotel Chain®. Book Now for your next trips to Yangon.
•	မြန်မာ အစားအစာ အချက်အပြုတ် ကျွမ်းကျင်ရမည်။
•	လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ ရှိရမည်
Work location No. 12, Po Sein Road, Tamwe Township, Yangon, Myanmar., Po Sein Road, Yangon
Job Function: Chef
Job posted: 8/2/2019
78 Days, Full time , Hospitality / Hotel
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ Duty Manager/Night Manager
Audio & Visual Technician
•	ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိရမည်။ •	ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့၍ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။
Spa & Gym Attendant
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ Accountant (Receiable)
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ Accountant (Receiable)
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ Commis I (Asiam)
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ Restaurant Captain (Food & Beverage)
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	နယ်မှလာရောက်လုပ်ကိုင်သူများအား အဆောင်စီစဉ်ပေးမည်။
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ Commis I (Western)
•	အစားအသောက် ဟင်းလျာများနှင့်ပတ်သက်၍ Food costing,Food hygiene မှ အစတည်ခင်း ကျွေးမွေးသည် အထိအသေးစိတ် စီမံရေးဆွဲ တာဝန်ယူ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရမည်။ •	F&B Services ဌာနနှင့် ပေါင်းကူးဆက်သွယ်၍ ညှိနှိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ ...
99 Days, Full time , Hospitality / Hotel
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ (Food & Beverage)
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Senior Sous Chef (Western)
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	နယ်မှလာရောက်လုပ်ကိုင်သူများအား အဆောင်စီစဉ်ပေးမည်။ Room Attendant /အိပ်ခန်းဆောင် သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ နေ့ပိုင်း၊ ညပိုင်းသင့်လျော်သလို တာဝန်ထမ်းဆောင်းနိုင်ရမည်။
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ Commis II (Western)
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ Demi Chef (Dim Sum)
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ Demi Chef (Western)
•	နယ်မှလာရောက်လုပ်ကိုင်သူကို အဆောင်စီစဉ်ပေးမည်။ •	မိမိ၏အရည်အချင်း ပေါ်မူတည်ပြီး သင့်တော်သော လစာကိုညှိနှိုင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
120 Days, Full time , Hospitality / Hotel
•	GYM Trainer အတွေ့အကြုံရှိပြီးအုပ်ချုပ်ရေးကို နိုင်နင်းစွာ အုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်။ •	Hotel Fitness GYM လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၃ နှစ် အထက်ဖြစ်ရမည်။
•	Asian, Western, Dishes များအားကျွမ်းကျင်စွာ ချက်ပြုတ်နိုင်ပြီး Decoration ပိုင်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမည်။ Sous Chef (Asian Food)
•	အာရှအစားအစာ ကျွမ်းကျင်စွာ ချက်ပြုတ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	နည်းစနစ် မှန်ကန်စွာ သန့်ရှင်းမှု၊ စည်းကမ်းရှိမှုများကိုဦးဆောင်နိုင်ရမည်။ •	ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ CDP (Asian Food)
131 Days, Full time , Hospitality / Hotel
Chef Hotel & Restaurant jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Best Western Green Hill Hotel (Yangon) Hotel & Restaurant Jobs Hotel & Restaurant Jobs Chef Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Work in Yangon (Rangoon)(5145)
Work in Mandalay Region(492)
Work in Mandalay City(93)
I.E.M Co., Ltd.(54)
Great Victory Food & Beverage Co.,Ltd.
Asia Winner Industrial Limited
Line Cook & Junior Chef
Tanintharyi Region 51 Days
Tanintharyi Region 72 Days
Yangon (Rangoon) 86 Days
Demi Chef (Western)
Magway Region 121 Days